Kelvin’s Pool Bar - Amazing Yangon
Home /Event/Kelvin’s Pool Bar
Kelvin’s Bar ကိုလာတဲ့ ချစ်Customers အားလုံးကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့နည်းလမ်းက အမြဲပေါက်ကွဲထွက်နေတဲ့ DJ Music တွေပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။
Unplugged Band ဖျော်ဖြေမှုအောက်မှာ စစ်မှန်တဲ့ အနုပညာတေးဂီတတွေကြောင့်လည်း ပျော်ရွှင်စေနိုင်မှာပါ။
Barပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ နာမည်ရပြီးသား XIIX Bandက ဒီ 1st June စနေညမှာ 9pm မှ 11pm အထိ သီဆိုဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Beer Buffet လေးနဲ့ပါ ဘုရားပေါ့။
တစ်ယောက်မှတစ်သောင်းကျပ်ထည်းဖြင့် Heineken စည်ဘီယာ တဝ မော့ရင်း Unplugged သီချင်းတွေ နဲ့ Chill ကြမယ်။
(ဒီညမှာ Beer Buffet အချိန်ကတော့ ည၈နာရီမှ၁၀နာရီ အထိပဲနော်)
အရှိန်ရသွားပြီ ဆိုရင်တော့ နောက်ပိုင်းချိန်တွေကို Kelvin’s Resident Dj တွေနဲ့ ဆက်မြူးကြရအောင်ဗျာ
1.6.19 (Saturday) – Unplugged Night
Book for your tables Early . .
Reservation @ 095158797, 09765158797
Address: No.3, Corner of Phoe Sein Road & Nat Mauk Road, Beside Chatrium Hotel, Bahan Tsp, Yangon.
#StillLitKelvin #Unplugged #Night #KelvinsPoolBar